Erling Haaland Oo Qirasho Sameeyay Kaddib Bixitaanka Sancho – Garsoore Sports
Erling Haaland Oo…
Erling Haaland ayaa qirtay inuu “ka xun yahay” in Jadon Sancho uu ka tagay Borussia Dortmund kaddib markii garabka reer England uu u saxiixay Manchester United xagaagan.
Sancho ayaa dhammeystiray heshiis £72.9 milyan oo uu ugu dhaqaaqay Old Trafford bishii hore, isagoo ahaa bartilmaameedka ugu sarreeya ee tababare Ole Gunnar Solskjaer labadii suuq ee hore.
21 jirkaan ayaa afar sano ku qaatay Bundesliga, isagoo dhaliyay 38 gool isla markaana diiwaangeliyay 45 caawin 104 kulan oo horyaalka ah.
Waxa uu si gaar ah ula dhacay Haaland oo isfahan qaas ah uu dhexmaray, isaga oo Noorwiijiga caawiyay 11 jeer x18kii bilood ee ay wada joogeen kooxda koowaad.
Sancho iyo Haaland ayaa ka caawiyay Dortmund inay ku guuleysato DFB Pokal dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore, iyagoo ka dhaliyay guushii ugu dambeysay oo ay ka gaareen RB Leipzig, iyo qaab ciyaareed soo daahay oo xaqiijiyay inay ku soo laaban doonaan Champions League.
Laakiin United ayaa si wax ku ool ah ugu dhaqaaqday saxiixa Sancho xagaagan, iyadoo xiddiga reer England aan looga baahneyn inuu ku laabto Jarmalka si uu isugu diyaariyo xilli ciyaareedka cusub taa beddelkeedana wuxuu usoo duulay Manchester markii uu fasaxiisa xagaaga soo dhammeeystay.
Haaland ayaa dhanka kale kula biiray kooxdiisa Dortmund xeradooda tababarka iyadoo wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalkiisa ay soo ururayaan. Wuxuu qirtay inuu ka xun yahay inuu arko Sancho oo ka tagaya kooxda, laakiin wuxuu rumeysan yahay in kooxdu leedahay awood weerar oo ku filan oo ay kula qabsato maqnaanshihiisa.
“Aniga iyo Jadon waxaan si dhab ah u lahayn isfahan, isagu waa cayaaryahan sarre waana murugo inuu baxay, laakiin taasi waa kubbadda cagta,” Haaland ayaa sidaas ku waramay.
Haaland ayaa bartilmaameed u ah kooxda United ee macalinka reer Norway ee Solskjaer wuxuuna isku dayay inuu la saxiixdo xiddiga ay wadanka wadaagaan bishii Janaayo 2020, markaasoo uu ku guuldarreystay in heshiis la gaaro.
20-sano jirkaan ayaa 57 gool dhaliyay 59 kulan oo uu u saftay Dortmund, Chelsea ayaana dooneysa inay la saxiixato xagaagan, kahor inta aan 75 milyan oo ginni oo heshiiskiisa lagu burburin karo aanay dhaqangelin sannadka 2022.